Aorus 5, laptọọpụ ịgba ọsọ larịị nke Gigabyte [Nyocha] | Akụkọ akụrụngwa
Laptọọpụ dịbu na nso osisi na ụwa nke egwuregwu vidio, agbanyeghị, ọtụtụ ụdị ahọrọla ịmepụta usoro laptọọpụ nke na-enye ọgụ na mpaghara egwuregwu. Will ga-enwe ike ịhụ ọtụtụ nyocha nke ụdị ngwaọrụ ebe a na Actualidad Gadget. Taa, anyị nwere ngwaahịa Gigabyte na tebụl nyocha maka oge mbụ. Chọpụta anyị ihe Aorus 5 ọhụrụ na-ezo, Gigabyte ntinye ọkwa nke laptọọpụ egwuregwu eji eme maka ndị niile na-ege ntị. Dị ka mgbe niile, anyị ga-ele ya anya nke ọma ka ị nwee ike ịmata ya nke ọma.
4 Multimedia na ndị ọzọ functionalities
N'ime ule anyị, anyị ejirila ụdị Gygabite Aorus 5 SB, ngwaahịa arụpụtara kpamkpam na rọba ojii. Anyị nwere akara ngosi ahụ na azụ na ọlaọcha mana na-enweghị ụdị RGB LEDs dị iche iche nke na ụdị ndị ọzọ na mpaghara ahụ na-ejikarị. Na nke a, anyị nwere usoro nke 3? 61 (W) x 258 (D) x 27.9 (H) mm, nke na-eme ya ngwa ngwa bụrụ otu n'ime ngwaọrụ "njikwa" dị n'ọtụtụ laptọọpụ egwuregwu anyị na-eji anwale. Ihe a tụrụ anyị n’anya.
Akụkụ: 3? 61 (W) x 258 (D) x 27.9 (H) mm
Ibu ibu: 2,2 n'arọ
Anyị nwere trackpad dị ọkara na bọtịnụ anụ ahụ abụọ na ala, njikọ dị n'akụkụ abụọ na azụ (dịka ọmụmaatụ netwọkụ na njikọ njikọ ike) yabụ ọ dị mma iji ya. Banyere obi jụrụ, anyị achọtala kpochapụwo ala na akụkụ ya, na-enweghị oke mkpọtụ mkpọtụ. O yiri ka ọ ga-ajụ oyi nke ọma ma chụpụ okpomọkụ nke ọma. O juru m anya otú kọmpat ya chaja na ike ọkọnọ bụ, dịkwa obere karịa na mbụ.
Ka anyị mee njem nlegharị anya na ntanetị, anyị na-amalite site na nhazi ahụ, ebe anyị na-agaghị atụ anya ihe na-erughị Intel Core i7-10750H (2.6GHz-5GHz), nke ahụ bụ, ọgbọ nke iri nke Intel processors, karịa gosipụtara. The version na anyị nwalere na-esonyere abụọ 8GB Ram na-echeta na-enye a ngụkọta nke 16GB DDR4 na 2933MHz nakwa na anyị nwere ike ịgbasawanye ruo 64GB, ebe anyị nwere ọrụ ndị ọzọ maka Mobile Intel HM470 Express Chipset yana integrated ndịna Intel UHD ihe osise 630 maka ọrụ ndị na-adịghị mkpa.
Ugbu a, anyị na-aga na eserese kaadị, ebe anyị na-ahụ a NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB dakọtara na teknụzụ NVIDIA Optimus. N'okwu a, anyị ejirila 1TB nke nchekwa SSD nwalee otu ahụ, mana cheta na anyị nwere oghere atọ nwere nchekwa, a 2,5 ″ HDD na abụọ M.2 SSDs.
Obi abụọ adịghị ya na teknụzụ anyị enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ siri ike maka ọnụahịa, anyị nwere kaadị eserese dị n'etiti na ngwaọrụ nwere RAM ọsọ ọsọ, ntụgharị dị n'usoro nke SSD na karịa processor egosipụtara, obere ikwu na nkwanye ùgwù.
Banyere njikọ ndị ahụ, anyị anaghị akọcha ihe ọ bụla, anyị ga-eleba anya n'ihe niile anyị nwere. Eziokwu bu na agbagharaghm ihe obula, Achọtala m laptọọpụ dị ọtụtụ na nke a, n'eziokwu, ọ tụrụ m n'anya inwe onye na-agụ kaadị SD nke ga-enyekwara anyị aka iji ya rụọ ọrụ ọtụtụ mgbe.
1x HDMI 2.0 (ya na HDCP)
1x USB2.0 -dị-A
1x USB3.2 Gen1 -dị-A
1x USB3.2 Gen2 -dị-A
1x DisplayPort 1.4 -dị-C karịrị USB 3.2 Gen 2
1 x Obere Ngosipụta 1.2
1 x SD kaadị agụ
1 x njikọta igwe okwu
1xAudio ngwakọta jack
1x Njikọ Ike
Banyere njikọ ikuku anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri Realtek RTL8411B LAN na Intel AX200 maka WiFi, Anyị nwere ezigbo WiFi dị ka ule anyị si dị, ma ọ nwere obere njedebe na ma 2,4GHz na netwọọdụ 5GHz. Banyere Bluetooth, enweghị ike ileghara nsụgharị 5.0.
Ikwu okwu banyere batrị anyi nwere 180W ibu na otu ndị Lithium polymer si 48.96Wh, nsonaazụ ya bụ otu ihe dị na ụdị ngwaọrụ a, ihe karịrị awa abụọ mgbe anyị chọrọ ya na egwuregwu vidio, ihe karịrị awa isii nwere ọrụ ọkọlọtọ.
Multimedia na ndị ọzọ functionalities
Ugbu a, anyị lekwasịrị anya na ngalaba LCD gị 15,6 sentimita asatọ, ọ nwere mkpuchi matte, mkpebi HD zuru oke, na nke kachasị mma, ọnụọgụ ume 144Hz. Ọ bụ LG mere ya wee nwee 72% nke oke NTSC. Ọ nwere obere bezel na n'elu anyị hụrụ ya HD mkpebi ogbako igwefoto. Ihuenyo bụ otu n'ime ihe ngosi ya, ọ gbanwee agba nke ọma, mmeghachi omume dị mma na nchapụta karịa ezuru.
Maka nke ya Orlọ Ọrụ Egwuregwu Aorus agwakọta ga-enye anyị ohere ịgbanwe ụfọdụ njirimara dịka ikuku na arụmọrụ. Anyị nwere kiiboodu azụ azụ azụ Ọ na-enye mmetụta na-adọrọ adọrọ na m nwere obi eziokwu na ọ dị mma n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ikekwe igodo ahụ "flapped" karịa ka ọ dị mkpa n'ọnọdụ ụfọdụ. Ọ dị mfe igwu egwu karịa ide.
Anyị anaghị echefu ụda ahụ ndị ọkà okwu abụọ nke 2W nke ọ bụla gbanwere nke ọma, Ọ bụ ezie na ha enweghị nnukwu olu dị elu, ha na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ stereo dị mma nke ga-eme ka anyị pụọ na nsogbu, na-enweghị bass mara mma, n'ezie.
Na nke a Aorus 5 SB anyị nwere «ntinye-larịị» maka kọmputa egwuregwu, na-enweghị ichezọ na anyị ga-achọta ya ihe dị ka euro 1.300 dabere na ebe ire ere. Ọ bụ eziokwu na nhazi ya na njirimara ya na-ebubata anyị n'etiti etiti, nke bụ eziokwu bụ na ọ dịkarịa ala achọghị m nnukwu ihe gbasara LEDs na ihe ndị ahụ nke ndị egwuregwu ọhụrụ nwere mmasị nke ukwuu. Ọ na - aghọ laptọọpụ dị mma iji buru ibu, nwere ihe karịrị ezigbo akụkụ na ibu ibu. Anyị nwere olile anya na ị masịrị nyocha anyị na echefula iji igbe igbe ahụ mee ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Aorus 5, laptọọpụ ịgba ọsọ larịị nke Gigabyte [Nyocha]
Kọntaktị kọmputa na-arụ ọrụ na olee otu esi arụ ọrụ?